Gịnị bụ ihe kasị mma ụmụ nwanyị ngwakọ bike? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Bridmụaka ndị inyom ngwakọ na-enyocha - ajụjụ ndị nkịtị
Bridmụaka ndị inyom ngwakọ na-enyocha - ajụjụ ndị nkịtị
Gịnị bụ ihe kasị mma ụmụ nwanyị ngwakọ bike?
Liv Alight 2 Diski. Ezubere makaụmụ nwanyịsi n’ala bilie.
Pụrụ iche Sirrus 2.0. Unisex dị ngwa, bara uruigwe kwụ otu ebe.
Cube Hyde Ọsọ.
GT Transeo Sport Nzọụkwụ Thru UrbanIgwe kwụ otu ebe.
Onye nlekọta HYB 8.8Hymụ Nwanyị Bike.
Raleigh Strada CityỤmụ nwanyị650B.
Onyegbula Onweya Makuwa 3 Remixte.
Hey ụmụ okorobịa! Site n'àgwà nke igwe kwụ otu ebe na igwe kwụ otu ebe, ịnyịnya ígwè ngwakọ bụ nke kachasị mma nke ụwa abụọ. N'ihi na ha na-egbo mkpa nke ọnọdụ ịnya ịnyịnya, enwere ike iji igwe kwụ otu ebe na-agagharị n'obodo ma ọ bụ dozie ụfọdụ ụzọ na-adịghị mma. Ọ bụ ihe dị iche iche ma ọ dịkwa mma ịpịa ala ọ bụla, yabụ anyị ga-eleba anya na ise isiokwu a Anyị mepụtara ndepụta a dabere n'echiche nke anyị, nyocha, na nyocha ndị ahịa.
Anyị atụlewo ogo ha, atụmatụ ha na ụkpụrụ ha n'ịbelata nhọrọ kachasị mma. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu ihe ọmụma na emelitere Maka ọnụahịa na ngwaahịa ndị a kpọtụrụ aha, jide n'aka na ịlele njikọ ndị dị na igbe nkọwa dị n'okpuru. Lee ndị kacha mma ise anyịnya igwe kacha mma.
Ise ngwaahịa na anyị ndepụta bụ Schwinn GTX. The Schwinn GTX bụ ngwakọ igwe kwụ otu ebe nke dị mma n'okporo ụzọ dị iche iche. Ọ nwere ụdị egwuregwu egwuregwu aluminom ma dị na ụdị 3 dị iche iche n'ụzọ nkịtị, ya bụ GTX1.0, GTX 2.0 na GTX Elite.Th igwe kwụ otu ebe a nke alloy siri ike iji mee ihe n'oge ọ bụla. Schwinn mere igwe kwụ otu ebe a na njikwa nzaghachi. Ọ nwere taya na-adịgide adịgide, nna ukwu ahụ ọbụlagodi ntakịrị pere mpe na ụzọ ụkwụ Schwinn GTX dịkwa njikere yana sistemụ nkwusioru n'ihu ndụdụ nke na-amịpụta bumps ma hụ na ọ na-aga nke ọma.
Schwinn GTX na-enye ezigbo igodo, ma ọ bụ maka njem ma ọ bụ naanị n'okporo ụzọ. O nwere taya 700c nke nwere otutu uzo nwere okpukpu abuo nke uzo - uzo di nma. Ejiri Schwinn GTX kwadebe ya na breeki kwụ ọtọ ma nwee nkwusioru siri ike.
Agbanyeghị, ọghọm ndị a bụ: * Oche ahụ nwere ike ghara iru ala ma njem ogologo gachaa; na * Ebughị n'obi maka iji ụzọ dị oke egwu. Ọ bụrụ na ị na-achọ igwe kwụ otu ebe nke na-enye ọsọ na agility na ego ọnụ, Schwinn GTX zuru oke maka gị. Ngwaahịa nke anọ dị na ndepụta anyị bụ Schwinn Network.
The Schwinn Network bụ igwe kwụ otu ebe zuru oke maka njem dị ogologo gburugburu gị. N'agbanyeghị obere ịdị arọ ya, igwe kwụ otu ebe a siri ike iji ruo ndị ọkwọ ụgbọ ogologo. Ma ị na-aga ọrụ ma ọ bụ na-agba ịnyịnya maka ihe omume ntụrụndụ, igwe kwụ otu ebe a na-enye njem dị mfe, dị mma ma dịkwa mma.
Igwe kwụ otu ebe a nwere Shimano EZ Fire shifter wuru na-ọsọ 21 nke emeziri maka ịhazigharị ọsọ ọsọ na ngwangwa zuru oke. Ezubere ya iji nye nnukwu ahụmịhe ịkwọ ụgbọala n'okporo ụzọ awara awara, ụzọ ụkwụ na-agba agba na ọbụna obere ugwu, etiti ahụ, akwa rim na eriri brek bụ nke aluminom. Ọdịdị ya dịgasị iche iche na-eme ka ndị na-agba ya jiri ya na-ebugharị ya, na-enye ha ohere ije na agagharị.
Ejiri netwọ 700win Schwinn Network wee gụnye Shimano 21-Speed ​​Revo TwistShifter na Shimano azụ derailleur. Ọ na-abịa na ndụdụ nkwusioru maka njem dị larịị. Ya uru bụ: * Ya azuokokoosisi kemeghi.
O nwere ike ịnabata ndị nọ n’elu ugwu dị iche iche; * Ọ na-eme ka ịrị ugwu dị mfe; na * Ọ dị mfe karịa igwe kwụ otu ebe ndị ọzọ. Ọghọm: Otú ọ dị, eriri igwe nwere ike ịgbanye n'ụgbọala ụgbọ ala; na * Ọ gaghị enwe ike ịnagide ụzọ ndị pụrụ n'okporo ụzọ. Na Schwinn Network ị nwere ike ịnụ ụtọ njem dị mma ma rụọ ọrụ nke ọma.
Igwe kwụ otu ebe a na - enye ọfụma ọfụma n’ihi na ọ na - abịa na Vibrazord Front Suspension tuning fork na 1.75 inch n’obosara mgbochi mgbapụ taya nwere siri ike eri. Ọ dị na nsụgharị 3: Network 1.5, Network 2 na Network 3.0.
Ma maka oge ezumike ma ọ bụ oge ezumike, igwe kwụ otu ebe a na - enye gị ohere ịnya nwayọ ma kwụsie ike. O zuru ezu site na ngwa ngwa 7-ọsọ na-agba ọsọ ọsọ maka ọsọ ọsọ na mfe. The Pave n 'Trail nwere Vibrazorb n'ihu fọk ahụ nke na-ebelata mkpọtụ na ụjọ na mbara ala.
Okpokoro taya ya nke anụ ọhịa ahụ dị sentimita 1.75 na-aga nke ọma na ngwa ngwa na pavment ahụ, ebe ụkwụ ya siri ike na-amịpụ ọkọ site na unyi n'ụzọ. Ejikọtakwara igwe kwụ otu ebe a na ọsọ ọsọ ọsọ Shimano 21.
Uru ya bu: * O di nma maka iji ubochi nile dika ije na ije ozi; * Ọ nwere ike ịnabata akpa aka ya maka akpa akpa ya; na * Ọ dị mfe. Uzo adighi nma bu: * Taya ya ka enwere ike itu obosara; na * Akuku ime ya nwere ike mebie mgbe ụfọdụ. The Sixthreezero Pave n 'Trail dị mma ma ọ bụrụ na ị na-achọ igwe kwụ ọtọ nke ị nwere ike ịnya ịrụ ọrụ, na-agba ọsọ, na ọbụlagodi ụzọ ụzọ.
Ngwaahịa nke abụọ na ndepụta anyị bụ Schwinn Discover. A na-eme Schwinn Discover maka ịchụgharị site na mbara ala dị iche iche. Ọ na-abịa na aluminom etiti na usoro aluminom na-agbanwe.
Ọ bụ ezie na ọ bụghị igwe kwụ otu ebe, igwe ngwakọ a na-egosi na ọ siri ike ma kwụsie ike, na-enwe ike ịrụ ọrụ dị iche iche na ihu ọ na-ezute. Igwe kwụ otu ebe a na - enye ọdịiche ọsọ ọsọ 21, na - eme ya igwe agile nke ị nwere ike iji n’okporo ámá obodo na-ekwo ekwo, ọdịdị ala, ma ọ bụ mbara ala siri ike Achọpụtara Schwinn Discover na ndụdụ nwere nkwusioru nke nwere ike ijikwa bumps na ala okwute.
Enweghị ikike ịkwọ ụgbọala chọrọ mgbe ị na-agba ịnyịnya ngwakọ a n'ihi na ọ dị mfe ịmegharị. Ọ nwere 21-ọsọ SRAM adịgide mgbanwe lever, ihe alloy ighikota adịgide shifter na a Shimano azụ derailleur d gearbox ụgbọelu. Uru ya bụ: * Fenders ya na-echekwa onye ọkwọ ụgbọ ala pụọ ​​na unyi na ọkọ; * Ọ na-enye ọtụtụ nsụgharị; * Ya mgbaka azuokokoosisi nwere ike ịnabata agba nke nha niile; na * Ọ nwere ike iburu ihe.
Agbanyeghị, igwe kwụ otu ebe a dị oke arọ. Ọ bụrụ na ị na-achọ igwe kwụ otu ebe nke nwere ike izute ihe dị iche iche na-esiri ike, Schwinn Discover bụ igwe kwụ otu ebe ị nwere ike ịdabere na ya. Tupu anyị enye nọmba ahụ, gụọ nkọwa dị n'okpuru maka azụmahịa ọhụụ na nke ọ bụla n'ime ihe ndị a, ma jide n'aka na ịdenye aha ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnọ na ụbọchị na ngwaahịa kachasị mma n'ebe ahụ.
Ka emechara, anyị n'elu ngwakọ anyịnya igwe bụ Sixthzezero EVRYjourney. Na ileba anya mbu, nke isii a bụ EVRYjourney dị ka igwe kwụ otu ebe, mana na nyocha nke ọma, ọ bụ ngwakọ ngwakọ a kwadebere ya na igwe elegharị azụ nke 250 watt. Ọ na-enyere ụzọ abụọ aka: enyemaka ụkwụ na ọkụ eletrik zuru oke.
Na okporo ụzọ, igwe kwụ otu ebe nwere ike iru ọsọ ọsọ ruo 24 km / h zuru oke eletrik. Site n'enyemaka pedal, ọ nwere ike iru 48 km / h, nke pụtara na a na-arụ ọrụ moto ahụ ka ọ na-aga. Na oche azụ ị ga-ahụ batrị elekere 250 watt ezubere iji gbaa b Ruo kilomita 15 na ụgwọ zuru ezu.
ịgbanwe azụ derailleur
Design-maara ihe, na EVRYjourney bụ ihe magburu onwe igwe kwụ otu ebe maka ukporo agafe. Ọ bụ ngwakọta nke ngwakọ na ụgbọ mmiri n'ụgbọ mmiri nke nwere otu ihu ala dị jụụ, nke dị jụụ nke na-etinye ahụ gị n'ọnọdụ ziri ezi. A kwụrụ igwe kwụ otu ebe a site na aluminom nke nwere anụ ọhịa 1.95 n'obosara, taya dị larịị.
Mgbe ị na-agba ịnyịnya ígwè ahụ na-enye ọnụọgụ dị iche iche site na 1-ọsọ, 3-ọsọ, 7-ọsọ na ruo 21-ọsọ maka ọdịiche dị iche iche dị iche iche, ọ nwere ike ị nweta gị ebe ị na-aga na ọsọ na-adịghị oke ọsọ ma ọ bụ nwayọ nwayọ, mana nwere ikike ziri ezi ka ịnụ ụtọ ịgba ọsọ. EVRYjourney ngwakọ ngwongwo nwere 26 x 2 nke anụ ọhịa na-acha ọcha na-acha ọcha. O nwere 7-ọsọ Shimano Tourney n'azụ derailleur na 7-ọsọ Shimano Index Revo Shifter.
N'otu oge ahụ, ọ kwadebere ya n'ihu na n'azụ diski brek yana a akpa ogbe na mudguards. Uru ya bu: * O nwere otutu uzo: nhọrọ; * O nwere fendụ iji debe unyi na ọkọ; na * Enwere ike iji ya maka njem, agbanyeghị, ọ kaghị mma maka iji ụzọ na-aga n'okporo ụzọ, yabụ ọ bụrụ na ị na-achọ igwe kwụ otu ebe nke dị mma maka njem kwa ụbọchị ma ọ bụ ịnyịnya nkịtị na ịnwere ike ijikwa ụzọ ole na ole siri ike, mgbe ahụ sixtyreezero The EVRYjourney ngwakọ e-bike bụ otu n'ime nhọrọ kachasị mma n'ebe ahụ. Na nke ahụ bụ ihe niile maka anyị ise kasị mma ngwakọ anyịnya igwe na ahịa.
Lee nkọwa dị n'okpuru maka njikọ maka ozi nkọwa zuru ezu na ngwaahịa ọ bụla. Chetakwa ịhapụ okwu ka anyị mara. Nke ahụ bụ ya maka ugbu a.
Kedu ụdị ngwakọ ngwakọ kacha mma maka ego ahụ?
Ngwongwo ngwakọ kacha mma
Cannondale Ndenye 4.
Nnukwu ToughRoad SLR 2.
Cannondale Nwa nwoke Alfine 8.
Pụrụ iche Sirrus 2.0.
Bombtrack Bilie Kwadoro.
BMC Alpenchallenge 01 Otu. Na-agba dị ka okporo ụzọigwe kwụ otu ebe, yiri ka angwakọsite n'ọdịnihu.
Kedu ka m ga-esi họta igwe kwụ otu ebe?
4 Atụmatụ maka ịchọta ihe zuru okeNgwakọ BikemakaWomenmụ nwanyị
Gbado anya naigwe kwụ otu ebenha. N'adịghị ka mmadụ,ụmụ nwanyịnwee torsos dị mkpụmkpụ, ubu warara na obere aka.
Tụlee ọdịiche dị n'agbata aka na ihe mgbaji.
Oche na pedaling nkasi obi.
Gbado anya na njikwa ka mma.
Hey ụmụ okorobịa! Ọ bụ Arleigh with Bike Shop Girl, ma taa achọrọ m iji nkeji ole na ole kọwaara gị ihe igwe kwụ otu ebe dabara. Nke a agaghị abụ nnukwu igwe kwụ otu ebe bara uru ma ọlị, mana ọ ga-enye gị isi ngwaọrụ iji hụ na igwe kwụ otu ebe gị ugbu a, ma ọ bụ enwere ike igwe ị na-achọ, dabara gị nke ọma. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-anụ ọkụ ọkụ ịgba ịnyịnya ígwè, ana m akwado itinye ego na igwe kwụ otu ebe.
Ya mere aga m agbanwe ọsọ ọsọ ma banye Jamis Xenith a na anyị ga-enyocha ma nye gị isi akwụkwọ m iji jide n'aka na igwe gị ga-adabara gị. (Bike rushes site) (nnụnụ na-ebe ákwá) Ya mere, anyị na-eyiri ụfọdụ spandex iji kpokọta igwe kwụ otu ebe. Ya mere, ihe mbụ ị chọrọ bụ ezigbo enyi.
Ya mere enyi ahụ ga-abụ onye na-ele gị anya na igwe kwụ otu ebe ma na-edozi ntọala Ee, ị nwere ike iji enyo mee ya; o siri ike, emere m ya. Ọ dị ọsọ ọsọ karị mgbe ịnwere enyi na-ele gị anya na-eme mgbasa ozi na ụgbọ elu. Ihe nke abuo bu ihe ndi kwesiri.
Imirikiti ngwaọrụ ị ga-achọ nwere ike ịchọta na multitool. Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na carbon ị ga-achọ otu torque spana na plumb Bob iji dozie ikpere gị site na iji pedal spindle. Ma n'ikpeazụ, teepu iji tụọ ihe niile mgbe ịmechara.
Mụ onwe m na-atụle tupu m mezie igwe kwụ otu ebe m na mgbe ahụ, ọ bụrụ na ị maara, enwere ike ịme m ihe na-ezighi ezi, ikekwe ikpere m ga-amalite na-afụ ụfụ mgbe m mechara mgbanwe ahụ. na m ga-alaghachi ebe m bidoro iji nke ahụ mere ntọala kama ịbụ ihe na-enye m ikpere ma ọ bụ azụ azụ. Yabụ m ga-etinye akpụkpọ ụkwụ m na anyị ga-amalite itinye Jamis Xenith Endura 1 a natara n'aka JensonUSA.
Enwere ụzọ abụọ iji mee ka igwe kwụ otu ebe kwụ otu ebe ka o kwe omume ịnwe igwe kwụ otu ebe. Firstzọ mbụ na ọkacha mmasị bụ iji onye na-azụ igwe. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-agba ịnyịnya ọhụụ ma ọ nweghị onye na-enye ọzụzụ igwe kwụ otu ebe, taa a ga m egosi gị otu esi adabere na mgbidi na ọ bụ otu ihe kpatara anyị nwere enyi a iji mee mgbanwe maka anyị ka anyị wee ghara ịdabere, lee anya ma obu daa.
Ọzọ, aga m edozi ogologo oche m n'ihe m kwenyere na a ga-enweta. Nwee igwe kwụ otu ebe ugbu a nke ị nwere ntụsara ahụ, were mmụba a. Ọ bụrụ na ọ bụghị, anyị ga-ahụ elu nke ukwu anyị ma jiri ya atụ ya, ma ọ ga-adị n'etiti oke nke otu ịdị elu ahụ, dabere na ị nọ n'okporo ụzọ, igwe kwụ otu ebe, igwe kwụ otu ebe na ụdị akpụkpọ ụkwụ ị bụ You na-ebu, mana ọ bụ ezigbo ebe iji nweta gị n'ime anụ ọhịa nke ebe ịchọrọ.
Na nzọụkwụ ọzọ, m ga-agbanye otu ụkwụ n'elu igwe kwụ otu ebe, dabere na mgbidi, wee jiri nlezianya pịa ebe ka ị ghara ịpụ na mgbidi. (egwu na-ewuli elu) Ya mere, ihe mbụ anyị chọrọ idozi bụ oche dị elu. Chọrọ ntụgharị dị mma na ikpere gị, agbachighị ya, ọ bụghị oke iwe.
Yabụ ọ bụrụ na ụkwụ gị dị larịị na okpuru ụkwụ ụkwụ ụkwụ, ị ga-achọ ijide n'aka na ị ga-enwe ikpere dị mma, gbadoro ụkwụ. Na nzọụkwụ ọzọ anyị ga-ahụ na oche ahụ dị mma maka anyị. Dịka ị pụrụ ịhụ, a na m agagharị gburugburu na-achọ ịchọta ebe ahụ dị nro ma mgbe m chọtara ya, m na-agagharị na-akụ ụda m ma chọta obere eriri ahụ n'okpuru ikpere m wee hụ na ọ gafere m.
Nke a na - ekwusi ike na a na - eduzi ike ahụ na spal spindle na enweghị m mgbu ikpere, lee anya n'akụkụ mụgụ m, gbaa mbọ hụ na akwara m mechiri emechi ka azụ m gharakwa gbaa gburugburu, m nọ oche adịghị enwe mmetụta nke ọma ma ọ bụ igwe kwụ otu ebe abụghị ogologo oge n'oge a. Ihe ịrịba ama ọzọ na igwe kwụ otu ebe adịghị adabara gị bụ na ị na-agbatị n'ubu gị ma ọ bụ n'azụ gị maka njikwa ahụ. Ọnọdụ ịgba ịnyịnya ígwè kachasị mma nwere ike ịdị ka nke a.
Azụ m dị mma ma dịkwa mma ma dịkwa mma, ubu m adịghị agbatị, ikpere aka m dị mma ma nwee ahụ iru ala ma anaghị m etinye onwe m n'ọrụ n'ụzọ ọ bụla. Nke ahụ bụ nnukwu ọsọ ọsọ nke ihe m na-achọ na Av ery basic bike fit. Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu mgbanwe, ọ bụrụ na ị nwere mgbu ikpere, ala azụ, ubu, n'ezie, ọ bụrụ na ị na-agbanye (ọchị) ihe ọ bụla dị anya, ọkachasị ọnya, lee ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe, chọta onye ọkachamara na-ahụ maka igwe kwụ otu ebe Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, ọ bụrụ Agbaghara m ihe, biko tufuo ihe gị kwuru n'okpuru.
Ọ bụrụ na edemede a nyere aka, denye aha ma ọ bụ dị ka m na YouTube ka m mara na m ga-aga n'ihu n'okporo ụzọ a maka Bike Shop Girl. Lezienụ anya maka nyocha isiokwu na-abịanụ nke a Jamis Xenith Endura 1 nke anyị nwere site na JensonUSA. Ruo oge ọzọ ọ bụ Arleigh na Bike Shop Girl yabụ jide n'aka ịdenye aha, gaa na bikeshopgirl.com na anyị ga-ahụ gị oge ọzọ.
Kedu ụdị ngwongwo ngwakọ kacha mma?
Ngwongwo ngwakọ kacha mmaenyocha
Triban RC500 ewepụghị mmanya diski. Nippy n'okporo ụzọ.
Carrera ụzọ ụgbọ oloko 1. Uru maka ego.
Jenụwarị 10 2020bọchị 2020
Ego ole ka m kwesịrị imefu na igwe ngwakọ?
Ego ole ka m kwesịrị imefu igwe kwụ otu ebe? Adịghị mkpaemefuihe karịrị $ 500 ma ọ bụrụ na ị nọ na mmefu ego maka ihe ọhụrụigwe kwụ otu ebe. Na nso nke $ 450-500, ị nwere ike nweta ezigboigwe kwụ otu ebeigbo mkpa gị.03.26.2021
Ngwakọta igwe ngwakọ ọ bara uru?
Ndingwakọ anyịnya igwe bara uruọ? Ha bụ.Ngwakọnwere ike ọ gaghị abụ ezigbo nhọrọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ aigwe kwụ otu ebeakpan akpan maka anya-n'okporo ụzọ ma ọ bụ ọduọ, ma ọ bụrụ na ị chọrọ aigwe kwụ otu ebenke nwere ike ijikwa ụdị ụdị dị iche iche, iji ụbọchị ọ bụla, ịnya ịnyịnya, na ịnyagharị n'okporo ụzọ, mgbe ahụ ị gaghị ahụ ụdị kacha mmaigwe kwụ otu ebenke ahụ dabara na ụgwọ ahụ.
Ekwesịrị m ịnweta ngwakọ ngwongwo ma ọ bụ gravel?
Ọ bụrụ na ebum n’uche bụ ịga otu ụdịrị ịnyịnya maka ozi, naigwe kwụ otu ebebụ nhọrọ ka mma. Agravel igwe kwụ otu ebena-aga ịrụ ọrụ ka mma n'okporo ụzọ, ma ọ ka na-arụ ọrụ nke ọma na pavụ. Naanị buru n'uche na aigwe kwụ otu ebena-aga naanị ịme ọtụtụ ihe n'okporo ụzọ.
Igwe ngwakọ: kachasị mma maka ndị na-agba ọsọ na obere njem
Ha dị mma ma ọ bụrụ na ịchọrọ ikpuchi-okporo ụzọebe dị anya mana achọghị ịmegharị onwe gị n'ọnọdụ ịnọ na-adịghị mma. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịga ngwa ngwa na mmaokporo ụzọmana choro onodu kwesiri iruo, ma obunwetaon na dobe handlebars, nke a bụ ụzọ isi na-aga.
Ngwakọta igwe kwụ otu ebe dị mma maka ogologo oge?
Ee,ọgba tum tumnwere ike na-aga n'ezieogologo ụzọ. Abụ aezimix nke ugwu na okporo ụzọigwe kwụ otu ebe; ọ bụukwunhọrọ ịnyagharị n'okpuru ọnọdụ dịgasị iche iche (ngwakọta nke On-road, off-road ride). N’ebe dị ala, o nwere taya sara mbara karịa nke ị na-ahụkarịigwe kwụ otu ebema ya mere chọrọ ntakịrị mgbalị.Sep 10 2020
Ngwakọta igwe ngwangwa di mma?
Anyịnya igwe ngwakọNjirimara niilekacha mmaụzọ nke ụzọigwe kwụ otu ebena ugwuigwe kwụ otu ebe! Ha siri ike ma sie ike, na-eme haukwun'ihi na a bit nke anya-ụzọ na gravel ịnya, ma nwere dịtụ mkpa niile na-teren taya na a dịgasị iche iche nke gearing nke na-eme ha ngwa ngwa n'okporo ụzọ.
Kedu ngwongwo ngwakọ kacha mma maka ụmụ nwanyị?
Ihe nchoputa Schwinn bu otu n’ime umuaka umuaka umuaka umuaka nke alumini a. Ihe nlere a nwere okpukpu iri na isii nke anụ ọhịa nke Schwinn nke enyere iji nye ndị na-agba ịnyịnya ígwè ezigbo nkasi obi.
Kedu ihe m kwesịrị ịtụ anya site na ngwakọ ngwakọ?
Otu ngwakọ ngwakọ bụ ngwakọ nke igwe kwụ otu ebe na igwe kwụ otu ebe, na-ewere nke kachasị mma nke igwe kwụ otu ebe iji mepụta igwe dị mma na mbara ala niile. Atụmatụ ndị ị ga-atụ anya gụnyere: Taya ndị sara mbara karịa ndị nọ n'okporo ụzọ, ma warara karịa taya igwe kwụ otu ebe - 28-32c bụ ihe nkịtị mana ọ nwere ike ịrịgo 42c.
Enwere ike iji igwe kwụgbọ njem dị ka ngwakọ?
Ngwakọta ngwongwo kwesịrị ịbụ ụdị igwe kwụ otu ebe ị na-eji maka ụdị ịgba ịnyịnya. Nwere ike iyi uwe na Mkpa 600 ebe ọ bụ na enweghị agbụ mmanụ, ị ga-echebekwa site na mmiri na-agba mmiri site na ndị na-agba ogologo!